मोक्तान दम्पतीलाई अमेरिकामा सरकारी सम्मान ! - Enepalese.com
मोक्तान दम्पतीलाई अमेरिकामा सरकारी सम्मान !
इनेप्लिज २०७९ जेठ ३१ गते २२:०१ मा प्रकाशित
भर्जिनियाको मनाससम़ा आयोजित कुन्ती मोक्तान साझले ऐतिहासिक सफलता पाएको छ ।
अमेरिकाको मेरिल्याण्ड स्टेटका सांसद ह्यारी भण्डारी मुख्य अतिथि रहनु भएको उक्त कार्यक्रम रुषाज् ईन्टरप्राईजेज ले आयोजना गरेको थियो । टेलिभिजनका सफल उद्घोषक सरोज केसीले संचालन गर्नुभएको उक्त कार्यक्रममा रुषा केसीले उदिघोषणमा सहयोग गर्नुभएको थियो । कार्यक्रममा बरिष्ठ संगितकार शिला बहादुर मोक्तानले पहुलो पटक आफ्नै स्वरमा गित गाएर सुनाउनु भएको थियो । नायिका पुजा चन्द लोक गायक राम प्रसाद खनाल को पनि उपस्थिति थियो ।
मेरिल्साण्ड सासंद ह्यारी भणाडारीले मेरिल्याण्ड राज्यको तर्फबाट कुन्ती मोक्तान तथा शिला बहादुर मोक्तानलाई मेरील्याण्ड राज्यको झण्डा ओढाएर सम्मान पत्र प्रदान गर्नुभएको थियो ।
अन्तराष्ट्रिय कलाकार मञ्च का सस्थापक अध्यक्ष राम प्रसाद खनालले मोक्तान दम्पतिलाई कलाकार मञ्च को तर्फ बाट सम्मान पत्र प्रदान गर्नु भएको थियो । पछिल्लो पुस्ताकी गजल गायिका १३ बर्षकी ईसान्भी मिश्रले गीत र सरिसा अधिकारीले चोली राम्रो गीतमा नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए ।